Ifulethi lesevisi ye-Pent House e-Wuse 2.
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Ango
I-loft yethu yegumbi elilodwa ethokomele iyisitezi esisezingeni eliphezulu futhi esiseduze kakhulu neSikhumulo sezindiza nezinye izingxenye zedolobha.
Ifulethi liwumbhede owodwa one-ensuite efakwe ngokuphelele ngemuva kokuphakelwa kukagesi ngemuva kanye ne-stand by generator. Ngendawo enamasu enhliziyweni yedolobha. Ukude ngemizuzu embalwa nje ukusuka kumakilabhu, izindawo zokudlela, izikole, izindawo zokungcebeleka, ukudla okusheshayo namapaki.
yayo Ethokomele, elula futhi Eyingqayizivele. iyiKhaya kude nasekhaya. Ibekwe endaweni ekahle enkabeni yedolobha nokuhamba ibangana ukuya ezitolo ezinkulu, amakhemisi, ukudla okusheshayo okungaphansi kwemizuzu emi-5. Ukuvikeleka Kuphezulu.
Esikhaleni sakho kukhona i-mordenly eqedwe kahle I-Single room ene-ensuite yokungena yangasese. Ifakwe ngokugcwele Ikhishi elifakwe kahle. Isimo esihle esinokuthula nesikugcina ukhululekile. Ukuhlala lapha kuzoqinisekisa ukubuya !!
4.82 ·22 okushiwo abanye
Thula, Serene n Unokuthula
UAngo Ungumbungazi ovelele